Chelsea Oo Guul Muhiim Ah Kasoo Gaadhay Fulham, Higuain iyo Jorginho Oo Shabaqa Gaadhay & Blues Oo Cadaadiska Kusii Haya Man United Iyo Arsenal – Latest Sports News
Chelsea Oo Guul Muhiim Ah Kasoo Gaadhay Fulham, Higuain iyo Jorginho Oo Shabaqa Gaadhay & Blues Oo Cadaadiska Kusii Haya Man United Iyo Arsenal
Kooxda Chelsea ayaa guul muhiim ah kasoo gaadhay dhigeeda Fulham kulan xiiso badnaa oo London Derby ahaa isla markaana ay kooxda laga adkaaday ee Fulham si weyn u dagaalantay walow ugu dambayn dhibcaha laga qaatay.
Blues ayaa goolasha ay kulankan guusha ku gaadheen ka helay weeraryahan Gonzalo Higuain iyo xiddiga canaanta badan la kulmaya ee Jorginho halka goolka Fulham uu saxeexa Callum Chamber oo Arsenal amaah kaga maqani.
Kulanka ayaa ku bilawday qaab ay kooxda wax weeraraysa tahay Chelsea oo marti ahayd oo heshay fursado door ah horraanta ciyaarta walow aysan halis badan lahayn.
GOOAL: Fursadii ugu horreysay ee xaqiiqo ah ayaa noqotay mid shabaqa gaadha waxaana kulanka 0-1 ka dhigay Gonzalo Higuain oo hoggaanka ugu dhiibay Chelsea kaddib markii uu si toos ah u darbeeyay baas hoose oo uga yimid Azpilicueta oo garabka bidix kasoo galay xerada ganaaxa.
Mitrovic oo ah weeraryahanka Fulham ayaa darbad xoogan goolka Blues la beegsaday isaga oo kubad adag ku beegay goolhaye Kepa kaas oo oo kubadda gees u saaray.
GOOAL: Fulham ayaa kubadda uu saaray Kepa isku baastay waxaana soo tuuray kubad cajiib ah Ryan Babel iyadoo uu goolka Chelsea ku qabtay kubad cajiib ah Chambers oo ka dambeeyay xiddigaha kubadda sarre ku dagaalamayay.
GOOAL: Chelsea ayaan ka raagin hoggaankii daqiiqado kahor lagala wareegay, Hazard ayaa kubadda usoo baasay Jorginho oo meel xerada ganaaxa ka baxsan taagnaa khadka dhexe ee ree Talyaani ayaana si miisaaman cidhifka sarre ee goolka Fulham ugu beegay kubadda uu darbeeyay waxaana ay dhalatay iyadoo uusan dhaq-dhaqaaq samayn goolhayaha Fulham ee Rico.
Higuain ayaa markale ku dhawaaday inuu shabqa gaadho hoggaankana u dheereeyo kooxdiisa balse kubad uu goolka lahor tagay ayuu qaab xoogan u darbeeyay waxaana uu mariyay halka sarre ee goolka.
Higuain ayaa markale hoggaanka u dheerayn gaadhay Blues kaddib baas uu ka helay Azpilicueta oo ahaa xiddigii goolka horena ka caawiyay balse waxa markan isku daygiisa xoogan celiyay goolhaye Rico.
Qaybta hore ee kulanka ayaa kusoo dhamaatay hoggaan 1-2 ah oo ay haysatay kooxda Chelsea iyagoo sidoo kale lahaa inta badan maamulka ciyaarta.
Chelsea ayaa kaddib soo laabashada qaybta dambe abuurtay fursado kale oo ay ku doonayaan inay hurdo ugu diraan natiijada kulanka waxaana goolka kubaddo halis badan la beegsaday Hazard iyo Willian balse waxa ay dhaafin waayeen goolhayaha kooxda martida loo ahaa.
Mitrovic ayaa sameeyay fursad aad u halis badan isaga oo u muuqday mid ciyaarta bar-bardhacii kusoo celiyay balse kubad xeego ahayd oo uu qaab wanaagsan u tuuray ayaa wax yar u martay cidhifka birta sarre ee Chelsea.
CAJIIB: Markale ayuu Mitrovic isku dayay inuu natiijada kaga ciyaaro Chelsea daqiiqadihii ugu dambeeyay ee kulanka kaddib markii uu meel aad u dhaw ka madaxeeyay caawin uga timid Ayite balse waxa qaab cajiib ah u badbaadiyay goolhaye Kepa.
Ugu dambayn, Kulanka ayaa kusoo dhammaaday 1-2 iyadoo ay xusid mudan tahay in Fulham daqiiqadii ugu dambaysay laga diiday gool uu dhaliyay Ryan Sessegnon oo lagu xisaabiyay garab dhaaf.